यी हुन् आमा बनेका १० चर्चित नेपाली हिरोइन, सन्तानको नाम सहित ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
यी हुन् आमा बनेका १० चर्चित नेपाली हिरोइन, सन्तानको नाम सहित !
काठमाडाैं । सिनेमा अझ त्यस्तो संसार हो, जहाँ काम गर्नका लागि सदैव फिट देखिनुपर्छ । अझ हिरोइनका लागि भने यो मापदण्ड अनिवार्यजस्तै हो । आमा बनेपछि महिलाहरुमा ठूलो शारिरीक परिवर्तन देखिने भएकाले उनीहरुले आफूलाई मेन्टेन गर्दै फिल्ममा ‘कमब्याक’ गर्नु अझ चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ ।
तर, संसारमा केही हिरोइनहरुका यस्ता पनि छन् । जसको फिल्मी करिअर आमा बन्नुअघि र आमा बनिसकेपछि पनि कुनै परिवर्तन आएको पाइदैंन् । यस्तै हिरोइमा गनिन्छन्,—एन्जेलिना जोली । तर, नेपालमा भने हिरोइन आमा बनेपछि फिल्ममा ‘कमब्याक’ गरेका उदाहरण कम छन् । अझ गरिहाले पनि ती कमब्याक सुखद् हुन सकेका छैनन् । धेरैजसो नेपाली हिरोइनहरु आमा बनेलगतै फिल्मबाट गायब भएका छन् । कतिपय हिरोइनहरु आमा बनेपछि पनि निरन्तर नेपाली फिल्ममा सक्रिय त भएका छन् तर उनीहरुमध्ये धेरै कमले मात्र सुखद् नतिजा हात पारेका छन् । नेपाली सिने जगतमा लामो समय चर्चा बटुलेका धेरै हिरोइनहरु आमा बनेका छन् ।
तीमध्ये आमा बनेका नेपाली हिरोइन –
कुनै समयकी सम्भावना बोकेकी नायिका रुपमा अरुणिमालाई लिइन्थ्यो । अहिलेका कतिपय हिरोइनको तुलनामा उनको उनको चर्चा पनि चुलिएकै हो । ‘अजम्बरी’ फिल्मबाट रजतपटमा भित्रिएकी यी नायिकालाई मुख्य भूमिका देखिएको सिनेमा भने ‘धडकन’ हो । एकताका ‘गहना’ टेलिश्रृखलाबाट चर्चामा कमाएकी अरुणिमाले ‘अभिमन्यु’, ‘आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ’, ‘अग्नीज्वाला’, ‘भरोसा’, ‘वुवाआमा’, ‘के यो माया हो’ लगायतका झण्डै दर्जनभन्दा बढी नेपाली फिल्ममा अभिनय गरिन् ।
एकताकाकी चल्ती नायिका हुन् —ऋचा घिमिरे । काठमाडौंमा जन्मिएकी घिमिरे मोडलिङ, टेलिभिजन र म्युजिक भिडियो हुँदैं नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भित्रिएकी हुन् । विं सं. २०६७ सालमा निर्देशक शंकर घिमिरेसँग ऋचा विवाह बन्धनमा बाँधिइन । त्यसपछि उनले सन् २०१२ मा पहिलो सन्तानलाई जन्म दिइन् ।
३३ वर्षीया यी नायिकाले अहिले तीन वटा सन्तान छन् । अमेरिकाको बाल्टिमोरमा बस्दैं आएकी ऋचा तेस्रो सन्तानको रुपमा ९ असारमा छोरी जन्माएकी हुन् । यसअघि उनी दुई सन्तान मिजास र महर्षिकी आमा बनिसकेकी छिन् । विवाहलगतै ‘तुलसी’ सिनेमा निर्माण गरेर निर्माता समेत बनेकी काली सुन्दरी भनेर चिनिने ऋचाको नेपाली फिल्ममा कमब्याक पनि कथा नै बन्ने देखिन्छ । उनले ‘विष’, ‘छोडिगए पाप लाग्ला’, ‘देशदेखि परदेश’लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेर चर्चा बटुलेकी थिइन ।